उनले अगाडि लेखेकी छिन्, ‘काठमाडौलाई पानीको प्यास मेटा’एर आफु भने आँशुको भेलमा ‘डुबिरहेकी मेलम्चीको दुख र पिंडालाई टुलु टुलु हेरेर कहाँ बस्न सकिन्छ र ? मेलम्चीको यो द’र्दनाक अवस्थामा साथ र सहयोगको हात ब’ढाउनु अहिलेको आवस्यकता हो ।’अब सार्वजनिक यातायात खुल्ने, सरकारले थाल्यो यस्तो तयारी ! काठमाडौं । को-रोनाले देशका सम्पुर्ण यातायात छेत्रलाई तहस नहस पारिरहेको बेलामा सरकारले दुई जनासम्म यात्रु राखेर काठमाडौ उपत्यकामा ट्याक्सी सन्चालन गर्न दिने तयारी गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले दुई जनासम्म यात्रु राखेर ट्याक्सी चलाउन दिनेमा सकरात्मक देखिएको हो ।
Prevअस्पताल जलिरहँदा पनि डाक्टरहरुले बिरामीको मुटुको अपरेशन गर्न छाडेनन्
Nextफेसबुकमा लभ परेर बिहे गर्न ठिक्क परेकी केटी देखेर केटा भए बेहोस, गरे देह त्यागको प्रयास! यस्तो छ अचम्मको कारण